‘Ny fiarako no hafatrao’: Mifanamby amin’ny tanora hamoron-javatra avy amin’ny tsy misy ilay Afghana mpamorona zava-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 9:54 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, 한국어, ਪੰਜਾਬੀ, polski, македонски, English
Yaser Ahmadzai sy ny famoronany. Avy ao amin'ny tahirin-tsarin'i Yaser Ahmadzai's manokana. Nahazoana alalana.
Amin'ny maha-tanora mpianatra niha-lehibe azy tao amin'ny faritany ambanivohitr'i Nangarhar izay teo ambany fifehezan'ny fitondrana Taliban tamin'ny faramparan'ny taompolo 1990, ny hany mba loharanom-baovao nanome aingam-panahy ho an'i Yaser Ahmadzai dia ny fandaharan'ny Onjam-peo BBC isan-kerinandro izay nifantoka tamn'ny lohahevitra momba ny fanavaozana.
Ny hamorona sy hanangan-javatra – na inona na inona – no nofinofin'i Ahmadzai saingy noheverina toa tsy ho vita mihitsy izany tamin'izay fotoana izay tany Afghanistana.
Roapolo taona taty aoriana, namafa ny vovoka tamin'ny nofinofiny i Yaser Ahmadzai, ary nanomboka nanangona ny fitaovan'ny milina efa tranainy ary niasa tamin'ny fanamboarana fiara niaraka tamin'ny zanany lahy.
Noravahana ny sary famantarana “Speed ​​for Peace” (haingam-pandeha ho an'ny fandriampahalemana), nilaza i Ahmadzai fa mahita ity fiarakodia ity ho fanombohan'ny zavatra goavana kokoa izay mety hanome aingam-panahy ny tanora ao amin'ny firenena rotiky ny ady mba hamoron-javatra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tontolo manodidina azy ireo izany.
Niara-nipetraka tamin'i Yaser Ahmadzai ny Global Voices tao an-tranony tao Kabul renivohitra ary niresaka momba ny toeram-panavaozana, niasa alina ary nisafidy ny sekoly mihoatra noho ny toeran'ny Taliban.
Global Voices: Iza moa ianao?
Yaser Ahmadzai (YH): Izaho no Yasar Ahmadzai, mpikatroky ny fandriampahalemana. Matetika ihany koa aho no miasa amin'ny teknolojia ary manamboatra milina. Nahazo ny mari-pahaizana lisansa tao amin'ny sampam-pianarana momba ny asa fanaovan-gazety tao amin'ny Oniversite Kabul aho. Nahazo ny mari-pahaizana Master tamin'ny Peacebuilding and Applied Community Change (Fananganana Fandriampahalemana sy ny Fampiharana ny Fanovana ao amin'ny Vondrom-piarahamonina) tao amin'ny Oniversite West Virginia tany Etazonia aho.
GV: Inona no nahatonga anao nanapa-kevitra hanangana ity fiara ity?
YH: Indray andro, nahita tatitra momba ny nanamboaran'ilay lehilahy Pakistaney ny angidimby kely (avy amin'ny fitaovana madinika) iray aho. Nampatsiahy ahy ny fahatanorako fony aho mpianatra tamin'ny fananako hevitra marobe tamin'ny fanavaozana sy ny famoronana izany. Nanapa-kevitra aho fa hanao fiara izay afaka mitondra olona efatra. Nasiako ny zava-drehetra, hatramin'ny fihainoana mozika ka hatramin'ny jiro sy ny maro hafa izay ilainao amin'ny fiara. Niasa andro iray manontolo aho ary niasa alina mihitsy tamin'ilay fiara. Volana iray manontolo vao vitako izany. Faly be aho rehefa nitondra ny fiarako teny an-dalana ihany ny farany, izay namboariko manokana fa tsy nataon'ny olon-kafa.
GV: Efa nanamboatra zavatra hafa ve ianao teo aloha?
YH: In 1998-1999, as a school student, I was thinking about how to make things. Cars, censors, helicopters, and many more ideas. Unfortunately, it was a black time in Afghanistan and I didn’t have enough equipment or the facilities where I could make something. I tried a lot of things; I made a model car and a helicopter. I made something a censor-controlled car as well. Although the Taliban regime was controlling the country, I tried to inject ideas of change into my peers of that time. I was thinking of change and hoping that things will be different. My main aim was graduation from school. Most other young people left school to join the Taliban. I stayed in school to chase my dreams.
YH: Tamin'ny taona 1998-1999, raha mbola mpianatra aho dia nieritreritra ny fomba hananganan-javatra. Fiara, capteur, angidimby, ary hevitra maro hafa. Nampalahelo anefa fa vanim-potoana mainty ny tao Afghanistan ary tsy nanana fitaovana ampy aho na toerana hanaovako izany. Nanandrana zavatra maro aho; Nanao maodelim-piara sy angidimby aho. Nataoko ihany koa ny fiara arahana ‘capteur‘. Na dia nifehy ny firenena aza ny fitondrana Taliban, dia nanandrana namoaka hevitra fanovana ho an'ireo namako aho tamin'izany fotoana izany. Nihevitra ny fanovana aho ary nanantena fa hiova ny zava-drehetra. Ny famaranana ny sekoly no tanjoko voalohany. Nandao ny sekoly mba hanatevin-daharana ny Taliban ny ankamaroan'ny tanora hafa. Nijanona tany an-tsekoly aho hanatanteraka ny nofinofiko.
GV: Saingy moa ve tsy mbola toerana sarotra ho an'ny tanora hanatanterahana ny faniriany ao Afghanistana taorian'ny fitondrana Taliban?
YH: Ao Afghanistana amin'izao fotoana izao, manana toerana malalaka sy loharanom- pahalalàna ianao mba hahatanterahana ny nofinofinao. Tsy misy olona hanakana anao tsy hianatra na hanamboatra fiara ao an-tokontaninao. Firenena malalaka izay misy ny nofinofiny tanteraka ao ho an'ny tanora Afghana maro. Iray amin'izy ireo aho. Namboariko ny fotoanako: niasa tontolo andro aho tao amin'ny fikambanana fanampiana vahiny iray ary amin'ny alina aho no niasa nanao ny fiarako.
Ahmadzai miaraka amin'ny zanany lahy, manamboatra ny fiarany. Avy amin'ny tahirin-tsarin'i Yaser Ahmadzai manokana. Nahazoana alalana.
GV: Inona no tanjonao?
YH : Ankoatra ny fanatanterahana ny nofinofiko manokana, tiako ny hanome aingam-panahy ireo tanora Afghana hafa manana ny nofinofiny. Maro ireo tanora Afghana no manana hevitra amin'ny fanavaozana sy ny famoronana. Mieritreritra ny fotoana hanombohana izany izy ireo. Atombohy fotsiny ny asanao. Ataovy miaraka amin'izay hanananao ankehitriny ny asanao. Fotoana izao hanombohana.
GV: Ary inona no tanjona lehibe kokoa?
YH : Maniry ny hanangana foibe ho an'ny fanavaozana aho, izay ahafahan'ireo tanora Afghana mihaona sy manangan-javatra. Efa reko ny momba ilay tovolahy iray mikasa ny hiasa amin'ny tetikasa elektrika. Miezaka mihitsy aza aho hanohana ny tanora ara-bola amin'ny volako voafetra. Ankoatra izany, mikasa ny hiara-hiasa amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana aho ho mpilatsaka an-tsitrapo mba handehanana any amin'ny sekolim-panjakana ary hiresaka momba ny fanavaozana.
GV: Manana hafatra ho an'ny tanora Afghana ve ianao?
YH : Ny fiarako no hafatro: andeha hanao ny tsara indrindra ho an'ny rahampitso tsara kokoa. Varian-dresaka fotsiny isika Afghana, mila mihetsika isika! Andao hanao ny anjarantsika isika hitondrana ny firenena. Tsy hisy olona hampivelatra antsika raha tsy misy antsika. Isika no afaka manangana ity firenena ity. Antsoiko ihany koa hoe “SPEED FOR PEACE” (Haingam-pandeha ho an'ny fandriampahalemana) ity fiara ity ho fangatahana ny governemanta Afghana, ny antoko politika ary ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena mba hanafaingana ny dingana fandriampahalemana eto Afghanistan.